ရင်ထဲကခံစားချက်ကို ပရိသတ်တွေ နားလည်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့ သက်မွန်
2 Apr 2018 . 9:12 AM
မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် လည်းသူမအနေနဲ့တခါတလေမှာ သာမန်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ နေထိုင်ချင်သလို အနုပညာရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ အပြောအဆိုအနေအထိုင်ဆင်ခြင်ရတာတွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ သက်မွန်က သူမချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကို အခုလိုရင်ဖွင့် ခဲ့ပါတယ်။
“ကိုယ်ပြောချင်ပေမယ့် ပြောမထွက်တဲ့ စကားတွေ!
အနုပညာရှင်များဟာ ကိုယ်အမူရာ နှုတ်အမူရာ သိပ်ဆင်ခြင်ရပါတယ်..
ဒီတိုင်း ကွကိုယ်နေရင်တောင် မာနကြီးတယ် အပြောခံရတာပါ..
ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက်တွေ ထိန်းချုပ်နိုင်ပေမယ့် ကလေးနဲ့ပတ်သက်ရင် သာမန်မိဘတွေရဲ့ခံစားချက်တွေထက် မလျော့တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနောက်မှာ မပြောရဲ မတားရဲတဲ့ခါ ရင်ထဲမှာ မိဘကောင်းမပီသဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့အတူ နာကျဉ်ရပါတယ် 😢 😢 😢
သက်မွန်နဲ့သူရဲ့ သားကြီး အားချစ်
သက်မွန်အနေနဲ့ သာမန်လူလို သိပ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အချိန် ၂ ချိန်ရှိပါတယ်..
တချိန်က – ဘုရားဖူး ဘုရားရှိခိုးတဲ့ချိန်ပါ… ဘုရားကို အာရုံပြုပြီး အေးချမ်းစွာ ဘုရားစာရွတ် ဆုတောင်းချင်ပါတယ်..
နောက်တချိန်က- ကလေးတွေနဲ့ နေတဲ့အချိန်ပါ..
ချစ်တယ် 💛 💛 💛 💛 ” ဆိုပြီးတော့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Photo Credit- Thet Mon Myint Facebook
မငျးသမီးတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ လညျးသူမအနနေဲ့တခါတလမှော သာမနျသူတဈဦးအနနေဲ့ နထေိုငျခငျြသလို အနုပညာရှငျတဈဦးအနနေဲ့ အပွောအဆိုအနအေထိုငျဆငျခွငျရတာတှနေဲ့ပတျသတျလို့ သကျမှနျက သူမခဈြတဲ့ ပရိသတျတှကေို အခုလိုရငျဖှငျ့ ခဲ့ပါတယျ။
“ကိုယျပွောခငျြပမေယျ့ ပွောမထှကျတဲ့ စကားတှေ!
အနုပညာရှငျမြားဟာ ကိုယျအမူရာ နှုတျအမူရာ သိပျဆငျခွငျရပါတယျ..
ဒီတိုငျး ကှကိုယျနရေငျတောငျ မာနကွီးတယျ အပွောခံရတာပါ..
ကိုယျနဲ့ပတျသကျတဲ့ ခံစားခကျြတှေ ထိနျးခြုပျနိုငျပမေယျ့ ကလေးနဲ့ပတျသကျရငျ သာမနျမိဘတှရေဲ့ခံစားခကျြတှထေကျ မလြော့တဲ့စိုးရိမျမှုတှနေောကျမှာ မပွောရဲ မတားရဲတဲ့ခါ ရငျထဲမှာ မိဘကောငျးမပီသဘူးဆိုတဲ့ ခံစားခကျြနဲ့အတူ နာကဉျြရပါတယျ 😢 😢 😢
သကျမှနျနဲ့သူရဲ့ သားကွီး အားခဈြ
သကျမှနျအနနေဲ့ သာမနျလူလို သိပျဖွဈခငျြတဲ့ အခြိနျ ၂ ခြိနျရှိပါတယျ..
တခြိနျက – ဘုရားဖူး ဘုရားရှိခိုးတဲ့ခြိနျပါ… ဘုရားကို အာရုံပွုပွီး အေးခမျြးစှာ ဘုရားစာရှတျ ဆုတောငျးခငျြပါတယျ..
နောကျတခြိနျက- ကလေးတှနေဲ့ နတေဲ့အခြိနျပါ..
ခဈြတယျ 💛 💛 💛 💛 ” ဆိုပွီးတော့ သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ ရေးသားထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။